Mashruuca 'Tramway Tramway' ee ay ansixisay Wasaaradda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirMashruuca Tiğli Tramway oo ay oggolaatay Wasaaradda
19 / 02 / 2020 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka
mashruuca cigli tram wuxuu ogolaansho kahelay wasaarada
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ayaa ansixiyay Mashruuca 'Tram Line Tram'. Kadib marka mashruuca uu ogolaado Madaxtooyadu, qandaraaska dhismaha iyo geedi socodka dhismaha ayaa bilaabmi doona.
Marxalad kale ayaa ka gudubtay Mashruuca Khadka Tooska ah ee Izmir Metropolitan District Çiğli Tram Line. Mashruuca Khadka Tareenka ee 'Tiğli Tram Line', oo lagu soo daro Qorshaha Mashiinka Gaadiidka ee Izmir, waxaa oggolaaday Agaasimaha Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha ee hoos yimaada Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. Qiyaastii 11 kiiloomitir dherer ahaan ayaa loo soo bandhigi doonaa Agaasimaha Istaraatiijiyadda Madaxtooyadda iyo Miisaaniyadda. Kadib oggolaanshaha Madaxtooyadda, hindiso dhisme ayaa la sameyn doonaa.
Karşıyaka iyo qadka 'LineZBAN Çiğli Tram Line' waxaa lagu dhamayn doonaa qiyaastii 2,5 sano. hat, Karşıyaka Waxay noqon doontaa sii waditaanka taraamka. Si loo hubiyo isku-darka khadka iyo İZBAN, qiyaastii 300 mitir oo isku xirka isku xirka ayaa la dhisi doonaa kaasoo ka gudbi doona wadada giraan. Marka lagu daro khadka tareenka, waxaa jiri doona jidad lugeynaya iyo jidadka baaskiilka.
Gaadiidka loo qaado cusbitaalka, jaamacadaha, warshadaha
Saldhigyo taraam ayaa jiri doona hortiisa Isbitaalka Tababarka Gobolka Çiğli iyo Jaamacadda İzmir Katip Çelebi. Khadku wuxuu sidoo kale dhex mari doonaa Çiğli Ata Sanayi iyo Atatürk Aagga Wershadaha (AOSB). Muwaadiniinta ka qaada Alaybey tareenka waxay awood u yeelan doonaan inay u safraan Çiğli iyadoon la carqaladeyn. Markaa, baabuurta taraafikada ayaa la dhimi doonaa.
Thanks gaar ah Tunç Soyer ee Dağ
Duqa Magaalada Dowlada Hoose ee Izmir Tunç Soyer ayaa sidoo kale u mahad celiyay gudoomiye ku xigeenka AK Party iyo kuxigeenka Izmir Hamza Dağ, kuwaas oo howl galey intii lagu gudajiray howsha ansaxinta mashruucan. Isagoo la wadaagaya akoonkiisa warbaahinta bulshada, Soyer wuxuu yiri, “Warka wanaagsan wuxuu u yimid İzmir iyo Çiğli. Mashruucayaga taraafikada Çiğli waxaa ogolaaday Wasaaradda Gaadiidka. Aad ayaan ugu mahad naqayaa Wasiirka Gaadiidka Mehmet Cahit Turhan bilowga ah iyo İzmir ku xigeenka Hamza Dağ, oo mashruuca raacay kahor wasaaradda. ”
Xarunta 14 waydiisan doontaa
Khadku wuxuu ka koobnaan doonaa 14 saldhig. Ballaca xariiqda ayaa noqon doonta 7,2 mitir. Qeybta ugu weyn ee wadada waxaa loo qorsheeyay inay tahay laba-laamood, iyadoo la marsiinayo qashinka dhexe ee wadooyinka iyo jidadka jira. Wejiga koowaad ee mashruuca Karşıyaka Laga bilaabo saldhiga Çevreyolu, wuxuu daboolayaa xaafadaha Ataşehir iyo Çiğli İstasyonaltı, Çiğli İZBAN Station iyo Hospitaliğli Station Training Hospital oo leh buundada isku xirka. Waxaa jiri doona afar saldhig oo heerkaan ah 3-mitir.
Marxaladda labaad waxay ka bilaabmi doontaa Ataşehir Mahallesi waxayna raacaysaa Ata Sanayi Route, Katip Çelebi University, Ata Sanayi wadada waxayna ku dhamaan doontaa Isbitaalka Tababarka Gobolka Çiğli. Marxaladdan waxay jiri doonaan 7 saldhig, oo dhererkoodu yahay 500 mitir.
Çiğli Tram iyo Mashaariic badan oo kale Ansixinta ayaa laga sugayaa Ankara
Wasaaradda dib-u-dejinta cusub ee Newkapı-Sefakoy
Ansixinta ayaa timid Tram ilaa Cigli
Izmir Cigli Tram ayaa yimid